I-Vertical Francis Turbine Yesiteshi Samandla Kagesi Esimaphakathi Nesikhulu, i-China Vertical Vertical Francis Turbine Yezikhiqizi Zesiteshi Samandla Amanzi Esimaphakathi Nasikhulu, Abahlinzeki, Ifektri - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Qedela Amasethi Emishini Kagesi Nekagesi>I-Hydraulic Turbine
I-Vertical Francis Turbine Yesiteshi Samandla Kagesi Esimaphakathi Nesikhulu
I-hydraulic turbine ingumshini wamandla oguqula amandla okugeleza kwamanzi abe amandla ashintshayo emishini. Ama-turbines kaFrancis angasebenza endaweni ephakeme yekhanda lamanzi engamamitha angama-20-700. Amandla okukhiphayo asukela ku-kilowatts amaningana kuya ku-800 MW. Inobubanzi bohlelo olubanzi kakhulu, ukusebenza okuzinzile nokusebenza kahle okuphezulu.
Ama-turbine kaFrancis ahlukaniswe abe izinhlobo ezimbili: i-Francis eqondile kanye ne-Francis evundlile.
Ama turbines angu-Vertical Francis asebenza kahle kakhulu kunamaturbine avundlile, anomoya ongcono wokusebenza. Kumaturbine amakhulu, ukudlidliza kuthinta ukuzinza kokusebenza, kuyilapho amaturbine amile enokusimama okungcono kakhulu.
I-HNAC ihlinzeka ngezinjini zomoya zikaFrancis ezime mpo ezingafika ku-150 MW iyunithi ngayinye, ngokuvamile esetshenziswa kuma-turbine agelezayo aphakathi nendawo namakhulu.
Idizayini yomuntu ngamunye kubuchwepheshe besimanje inikeza ukusebenza kahle okuphezulu kakhulu, ubude besikhathi eside futhi ivikela inzuzo emangalisayo.